यस वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक | Epradesh Today
Homeफिचरयस वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरुहुँदैछ । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, सरकार पुस्तक ब्यवसायी सबैलाई पाठ्यपुस्तकको चटारो छ । यो वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक समयमै पाउन सक्लान् त भन्ने विषय पनि मनमै छ । बितेका वर्षमा सबै विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको सरोकारवालाले दाबी गरे पनि शैक्षिक सत्र शुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन् । पाठ्यपुस्तकको अभावमा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो नहुने, विद्यार्थीमा पढाइप्रति रुचि घट्नेलगायतका कारण देखिन्छन् । समयमै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याएर विद्यार्थीको शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने सरकारले थालेको प्रयास छदैछ । दाङका दश स्थानीय तहहरुका लागि अहिले जिल्लामा केही पाठ्यपुस्तकहरु आइसकेका छन् । सधै अभाव हुने सरकारी पाठ्यपुस्तक पनि यस वर्ष चैतमै देखिन थालेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुुन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा विद्यार्थी भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक हातमा पुग्ला त ? पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिनका लागि भएका प्रयास र यस शैक्षिक सत्रमा के कस्ता चुनौति छन् त ? भने विषयमा शिक्षा सरोकारवालाहरुलाई प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा धारणा लिएका छौं ।
सयममै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङ
दाङमा पछिल्लो समय पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको देखिदैन् र यो वर्ष पनि विद्यार्थीले त्यो समस्या पाउने छैनन् । किनभने भौगोलिक हिसाबले केही ठाउँ विकट भए पनि अधिकांश भू–भाग सुगम भएका कारण पनि यातायातको सहज पहुँचले किताब विद्यालय वा विद्यार्थीसम्म समयमै पुग्ने गरेका छन् ।
बितेको वर्षभन्दा अगाडि केही सामान्य समस्या भए पनि बितेको वर्षमा विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेका थिए र यो वर्ष पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनका लागि हामीले सबै स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखसँग सर्कुलर छ ।
सबभन्दा कि बजेट अभावमा कि भौगोलिक विकटता कि भने छपाई अभावमा विद्यार्थीले विगतमा पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको यथार्थ हो । तर दाङका त्यो पनि सामान्य मात्रै समस्या देखिएको हो ।
तर पछिल्लो वर्षमा पाठ्यपुस्तकको सहजताका लागि स्थानीय तहबाटै बजेट व्यवस्थापन हुने भएका कारण यो समस्या देखिने गरेको छैन् । अब हामीले यो वर्षमा पनि विद्यार्थीले भर्ना हुने वित्तिकै पाठ्यपुस्तक पाउनुपर्छ भनेर सबै स्थानीय तहमा चैत मसान्तभित्रै किताब पु¥याउने भन्ने छ ।
दाङका दशवटै स्थानीय तहका ४२० सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र शुरु भएको लामो समयसम्म पनि यो वा त्यो बहानामा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्ने गुनासो नआवस् भने समन्वय गरेका छौँ ।
वितेको वर्षमा दाङमा कक्षा १ देखि १० सम्म करिब ४० हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्ने भनेर सबै स्थानीय शाखासँग छलफल गरेका थियौँ ।
ढिलोमा बैशाख १५ गतेभित्रै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँछन् । भौगोलिक हिसाबले सदरमुकामभन्दा टाढा रहेका विद्यालयले पनि यो वर्ष समयमै किताब खरिद गरिसकेका छन् । शिक्षालाई गुणस्तर अभाव हुन नदिन पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन जिल्लामा बलियो छ भन्दा हुन्छ ।
पर्याप्त छन् पुस्तक
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ दाङ
नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकै आएको अवस्थामा दाङमा लगभग सबै किताबहरु आईसकेका छन् । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले पनि यो वर्ष पर्याप्त नै किताब छापेको छ भनेर जानकारी छ । लेखा, अर्थशास्त्र, कृषि भूगोललगायतका केही ऐच्छिक विषयहरु मात्रै आउन बाँकी छन् । करिब एक साताभित्र ति किताबहरु पनि उपलब्ध हुनेछन् ।
विगतमा भएका कमिकमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै विद्यार्थीलाई किताबको अभाव हुन नदिने हामी पुस्तक व्यवसायीहरु लागेका छौँ । अधिकांश विद्यालयले किताब लगिसकेका छन् केही विद्यालय मात्र बाँकी छन् ।
भौगोलिक विकटता भएका विद्यालयका विद्यार्थीले पनि यो वर्ष शैक्षिक भर्नासँगै किताब हातमा पाउने छन् । विगतमा बजेट अभाव, किताब छपाईमा ढिला लगायतका कारण किताब विद्यार्थीले समयमै पाउन नसकेको पनि कमि कमजोरी थिए । यस नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले विद्यार्थीलाई समयमै ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराईसकेका कारण पनि बजेट अभावमा किताब पाउन नसकिने भन्ने छैन् ।
बालबालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै नयाँ किताब पाउने आशा हुन्छ, समयमै उनीहरुले किताब पाउन सकेनन् भने उनीहरुको मनोविज्ञानमा पनि असर पुग्छ भने चाहेको जस्तो शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त गर्न निकै कठिन हुन्छ । हामी पुस्तक व्यवसायीले दाङका दश स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको सहजताका लागि जिल्लाका चार स्थानमा डिपो स्थापना गरेका छौँ ।
जिल्लाको घोराही, नारायणपुर, तुलसीपुर र लमहीमा पाठ्पुस्तक पाउने डिपो स्थापना गरेकोले पनि नजिकैको पायक पर्ने डिपोबाट विद्यालयले किताब लैजान सक्नुहुन्छ । बितेको शैक्षिक सत्रलाई आधार मानेर हामीले पुस्तक उपलब्ध गराएका छौँ सबै डिपोमा । ढिलोमा पनि जेठ १५ भित्र पाठ्यपुस्तक सबै विद्यार्थीको हातमा पुग्ने छ ।
विद्यालयले विद्यार्थीलाई छिटो पुस्तक पु¥याउन करिब धेरै विद्यालयमा पुस्तक गईसकेको छ । यो वर्षमा बिगतको भन्दा निकै सहज देखिन्छ । भौगोलिक हिसावले विकट मानिएका पालिकामा पनि छिट्टै किताब पुग्दैन कि भन्ने शंका गर्नु पर्दैन् ? विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउँछन् किताब प्रशस्त छन् । किताब अभावकै कारण पछुताउनु पर्ने शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक कसैलाई पर्दैन् ।
रकम अभावले पुस्तक नपाउने हुँदैन्
विद्यार्थीलाई पुस्तक समयमै पु¥याउन हामीले चैत १८ मै रकम निकासा गरेर बैंकमा जम्मा गरिसकेका छौँ । शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन हामीले यि कुराहरुमा अल्झिन हुँदैन् भनेर पाठ्पुस्तक समयमै सम्बन्धित विद्यालयमा पु¥याउन रकम निकासा गरेर जम्मा गरेका हौँ ।
गाउँपालिकामा ४३ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् तर आठवटा विद्यालय भौगोलिक हिसावले पनि बिकट रहेका कारण किताब समयमा पुग्न ढिलाइ हुनसक्छ भनेर हामीले हाम्रोतर्फबाट हुने कुनै पनि कुरा बाँकी राखेका छैनौं । पुस्तक व्यवसायीले पनि हाम्रो बाध्यतालाई बुझेर विद्यार्थीले समयमा नै पाठ्यपुस्तक पाउने छन् भन्ने विश्वासमा छौँ ।
बिगतमा शैक्षिक सत्रको ५÷६ महिनासम्म पनि पुस्तक पाउन नसकेका उदाहरणहरु पनि छन् तर बितेको वर्षदेखि पाठ्यपुस्तक अभाव हुने गरेको छैन् । ढिलोमा पनि बैशाख १५ सम्म विद्यार्थीले किताब पाउने छन् ।
बिगतमा जस्तो केही पुस्तक आउने, केही नआउने भन्ने पनि छैन् । सकेसम्म सबै किताब विद्यार्थीको हातमा कतिसम्म छिटो पु¥याउने भन्ने शिक्षा शाखा लागेको छ । गाउँपालिका बिकट भएपनि विद्यार्थीले समयमा ने सहजरुपमा पाठ्यपुस्तक पाउँछन् ।
अझै पनि २÷३ वटा विद्यालयमा यातायात सहजरुपमा पुग्न सकेको छैन् । ति विद्यालयमा झनै हामीले पहिल्यै पुस्तक उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हामीले विद्यालयसँग समन्वय पनि गरेका छौँ ।
वडा नम्बर ७ को जनहित बगरकुटी विद्यालय र वडा नम्बर ६ को अमारे मावि यातायात पुग्दैन तर पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाईराखेका छन् बिगतमा । अब यो वर्ष पनि पाठ्यपुस्तक अभाव भन्ने समस्या हुँदैन् । विद्यालयले पनि जागरुकता देखायो भने झनै राम्रो हुन्छ, हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने सबै काम गरिसकेका छौँ ।
विद्यार्थीले समयमा नै पाठ्यपुस्तक सहजरुपमा पाउनका लागि विद्यालयले पनि आफ्नो सक्रियता देखाउनुपर्छ । समस्या भए हामीलाई भन्नुस् सकेसम्म समस्या नै छैन् भनेर भनेका छौँ । मलाई लाग्छ यो वर्ष पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक समयमा नै पाँउछन् ।
केही दिन मात्रै नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुन बाँकी हुँदा अधिकांश विद्यालयले किताब खरिद गरिसकेका छन् । विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासँगै हात–हातमा पुस्तक बाँड्ने हो भने थप सहजता हुन्छ भनेर हामीसँग त्यो छलफल र सहमति भएको छ ।
गढवा गाउँपालिका भौगोलिक हिसावले टाढा र विकट मानिए पनि विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउँछन् भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । यस वर्ष गाउँपालिकामा भएका ३३ विद्यालयमध्ये वडा नम्बर २ को चिमचिमेमा रहेको विद्यालयमा यातायातको सहज पुग्न सकेको छैन् ।
अरु ठाउँमा त सहजरुपमा सडकको अवस्था राम्रो छ र विद्यालयले पुस्तक ढुवानी गर्न समस्या छैन् । यो वर्ष विभिन्न कारणले रकम निकासामा केही ढिला भयो तर यसको प्रभाव पर्दैन् । एक–दुई दिनभित्र नै रकम खातामा जम्मा गरिदिने छौँ र विद्यार्थी भर्नासँगै पुस्तक विद्यार्थीले पाउने छन् । रकम निकासा भईसकेको छ, जम्मा गर्न समस्या होईन ।
कर्मचारी समायोजनले पनि कर्मचारी आउने जानेक्रम चलिराखेका कारण रकम जम्मा गर्न ढिलाइ भएको छ । विगतमा भएको विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानेर पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने छौँ र गढवा गाउँपालिकामा विगतमा पनि पाठ्पुस्तकको समस्या भएको थिएन्, यो वर्षमा पनि सकेसम्म समस्या नआवस् भनेर काम गरिरहेका छौँ । हामीले ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिने गरेका छौँ,
पछि अपुग रकम पनि छिट्टै निकासा गरेर जम्मा गरेपछि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकको अभाव भोग्नु पर्दैन् । गाउँपालिकामा शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार गर्न हामीले समयमै पाठ्यपुस्तक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय मर्ज गर्ने प्रक्रिया भएको छ । विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने प्रक्रियामा छौँ । गढवा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयले पुस्तक डिपो लमहीमा रहेको छ ।
विद्यालयले हामीले रकम जम्मा गर्ने बित्तिकै किताब खरिद गर्ने र विद्यार्थी भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पनि हातमा पु¥याउने भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका छौँ । विगतमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले समयमा पाउन सकेनन् भन्ने गुनासा पनि आएनन् अब पनि आउँदैन भन्ने विश्वास म तपाईलाई दिन चाहन्छु । अब पाठ्यपुस्तक नै समयमा विद्यार्थीले पाउन सकेनन् भने त शैक्षिक गुणस्तर खस्कन्छ ।
त्यसैले त्यसो हुन नदिनका लागि हामीले कुनै पनि हालतमा समयमा नै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकून् भन्ने वातावरण बनाएका छौँ । समयमा नै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँछन् । पुस्तक प्रशस्त छापिएका छन् भन्ने खबर पाएका छौँ, त्यसैले पनि पुस्तकको अभावमा विद्यार्थीले चिन्ता गर्नुपर्दैन् ।
पाठ्यपुस्तकको अभाव छैन्
शान्तिनगर गाउँपालिकामा बितेको शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थीलाई पुस्तकको अभाव भएन । यो वर्ष पनि समयमै विद्यार्थीले पुस्तक पाउँछन् भन्ने हामी ढुक्क छौँ । बिगतमा पुस्तक अभावका समस्याहरु पनि भए होलान् तर नयाँ संघीय व्यवस्थासँगै गाउँपालिकामा शिक्षालाई चलायमान बनाउन शिक्षाका अधिकार प्राप्त भईसकेपछि हामीले शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने गरी काम गरेका छैनौँ ।
किनभने शैक्षिक गुणस्तर ल्याउन विद्यार्थीले पुस्तक नै पाउन सकेनन् भने त त्यसको नतिजा नराम्रै जान्छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै विद्यार्थीलाई हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन कुनै समस्या नहोस् भनेर शान्तिनगर गाउँपालिकामा सबै सामुदायिक विद्यालयले किताब ल्याउन प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।
यो वर्र्ष लेखा शाखाका सरहरु समायोजनमा जाने आउने प्रक्रिया भएका कारण पुस्तक खरिदका लागि केही असहजता भयो । तर हामीले एक दुई दिनभित्र रकम पनि निकासा गर्नेछौँ ।
विद्यार्थीको बिगतको डाटा अनुसार नै हामीले करिब ७५ प्रतिशत रकम खातामा जम्मा गरिसकेपछि विद्यालयले किताब लैजान सक्ने भएकाले हामी ढिला गर्दैनौँ ।
शैक्षिक गुणस्तर ल्याउन हामीले गाउँपालिकामा भएका २७ विद्यालयलाई २४ बनाएका छौँ, यो वर्ष एउटा थप भएर अब गाउँपालिका २५ सामुदायिक विद्यालय हुन्छन् र सबै विद्यालयले पर्याप्त पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीलाई पु¥याउने छ ।
पुस्तकको सहजताका लागि हामीले बितेको वर्षमा गाउँपालिकामा भएका विद्यालयलाई पुस्तकको सहजताका लागि श्रीगाउँमा पुस्तक भण्डार थियो तर यातायातका कारण केही असहजता देखियो अहिले तुलसीपुरबाटै ल्याउने व्यवस्था छ ।
हामीले सकेसम्म हरेक गाउँपालिमा एउटा पुस्तक डिपो सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा धेरै राम्रो पनि हुने थियो । गाउँपालिकामा विद्यालय पाँच विद्यालय जति भूगोलका हिसाबले केही विकट मानिन्छन्् तर ति विद्यालयका विद्यार्थीले पनि पुस्तकको अभाव झेल्नु पर्दैन् ।
किनभने सबै ठाउँमा यातायात पुगिसकेको छ । ऐच्छिक विषय अरु विषयभन्दा ढिला आउँछ किनभने विद्यार्थीको रोजाई के हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुँदैन् । तर अरु किताब भने समयमै विद्यार्थीले पाउने भनेर हामीले प्रक्रिया थालिसकेका छौँ ।
अर्को कुरा के भने हामीले अंग्रेजी शिक्षाका कारण निजी विद्यालयहरुतिर विद्यार्थी बढ्दै जाने र सामुदायिक विद्यालयतिर घट्दै गएको अवस्थामा हाम्रो गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि कक्षा पाँचसम्म अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ । कक्षा एकदेखि शुरु गरेका छौँ । यो वर्ष बढेर कक्षा दुईमा पनि अंगे्रजी माध्यममा अध्यापन गराउने छौँ ।
अंग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरु पनि हामीले समयमै पु¥याउने छौ । अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालय पनि किताब निःशुल्क नै उपलब्ध गराएका छौँ । गाँउपालिकाले अंग्रेजी माध्यमका सबै किताबमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
हामीले समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन प्रतिवद्धता गर्दछौँ । वितेको वर्षमा पनि विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रको शुरुवातमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेका थिए । यो वर्ष पनि कुनै समस्या हुँदैन् । पाठ्यपुस्तकको अभावमा शैक्षिक गुणस्तर खस्काउने पक्षमा हामी छैनौँ र हुन पनि दिदैनौ ।